မိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ…။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ…။
Posted by black chaw on May 17, 2013 in Creative Writing, Editor's Choice, My Dear Diary, Poetry | 83 comments
မိတ်ဆွေတို့ သတိထားမိကြမလား မဆိုနိုင်ပါဘူး…။
အခုတလော ဘလက်ချော ရေးတဲ့ ပို့စ်တွေမှာ အကိုးအကားတွေ များနေတာကို ပြောတာပါ…။
ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်မရှိလို့ သူများ အတွေးအခေါ်တွေ ခိုးခိုးချနေတယ်လို့ ပြောရင်လည်း ခံရတော့မှာပါပဲ…။
ဦးကုလား မဟာရာဇ၀င်ကြီးထဲက စာသား အပိုဒ်လိုက်တွေ…၊
နောက်ဆုံး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေထဲက စာသားတွေတောင် မချန်…၊
ခိုးချပြီး ပို့စ်တွေရေးနေမိတာကို ဘယ်သူမှ လက်ညှိုးမထိုးခင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို လက်ညှိုးထိုး လိုက်ပါတယ်ဗျာ…။
ဇာတ်မင်းသားလေး သိန်းဇော်ရဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်နာမည်ကို ကိုးကားခွင့်ပြုပါဦးလို့…။
ကဗျာလေးရဲ့ နာမည်က မိမိကိုယ်မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းခြင်း …တဲ့…။
အဲဒါလေးမပြောခင် ဇာတ်မင်းသားလေး မောင်သိန်းဇော်အကြောင်း နည်းနည်း ပြောကြဦးစို့ရဲ့…။
မောင်သိန်းဇော် ဟာ ဘလက်ချောထက် ၁၀ နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ကို ပိုကြီးပါတယ်ဗျာ…။
(မောင်သိန်းဇော်ရဲ့ မွေးသက္ကရာဇ်က ၁၀-၇-၁၉၅၉ ပါ…။)
မြန်မာရုပ်ရှင်တွေလိုပဲ နောက်ကြောင်းနည်းနည်း ပြန်မှ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်…။
ကျွန်တော် နေခဲ့ဘူးတဲ့ အင်းမမြို့လေးမှာ ကျောင်းကြီးပွဲတော် ဆိုတာကို နှစ်စဉ်ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်…။
အဲဒီပွဲတော်ကြီးမှာ ဇာတ်ပွဲတွေလည်း အမြဲကခဲ့ကြပါတယ်…။
ကျွန်တော် တို့ ငယ်ငယ်က ဖျော်ဖြေရေး အလွန်ရှားပါတယ်…။
တီဗီချယ်နယ်ဆိုလို့ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား တစ်ခုပဲ ရှားရှားပါးပါးရှိပါတယ်…။
ဒါကလည်း ကျွန်တော်တို့လို အခြေခံလူတန်းစားတွေနဲ့ တော်တော်ကြီးကို အလှမ်းဝေးခဲ့တာပါ…။
တိတ်ခွေထည့်ဖွင့်နားထောင်ရတဲ့ ကက်ဆက် ဆိုတာတောင် အိမ်တချို့မှာပဲ ရှားရှားပါးပါး ရှိခဲ့ပါတယ်…။
ရုပ်ရှင်ကလည်း တပ်ထဲမှာ တစ်လတစ်ခါလောက်လာပြတတ်တဲ့ နယ်လှည့် အဖွဲ့တွေကိုပဲ အားကိုးခဲ့ရတာပါ…။
ဆိုတော့ ရည်းစားထားဖို့ အသက်မပြည့်သေးလို့ ဘောလုံးကို ကျုံးကျုံးကန်နေရတဲ့ ဘလက်ချောကြီးတစ်ယောက်…
ခတ်လေလေ ဖြစ်နေတဲ့ စိတ်တွေနဲ့အတူ ကျောင်းကြီးပွဲမှာ လာကကြတဲ့ ဇာတ်ပွဲ တွေကို ကြည့်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့ဗျာ…။
မှတ်မှတ်ရရ ကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့ ဇာတ်တွေကတော့ မြို့တော်ချစ်ဖွယ်၊ နန်းဝင်း၊ ပုလင်းစိန်ဖန်ခွက်စိန်အမြည်းစိန် တို့နဲ့ …
ဇာတ်မင်းသားလေး သိန်းဇော် ကတဲ့ ဇာတ်ပွဲတို့ ပါပဲ…။
အဲဒီလို ကြည့်မိတဲ့အထဲက သိန်းဇော်က နည်းနည်းထူးခြားပါတယ်…။
သူနဲ့ ခေတ်ပြိုင် ဇာတ်မင်းသားတွေလုပ်ကြသလိုပဲ ရုပ်ရှင်လည်း ရိုက်ခဲ့ဘူးပါတယ်…။
သိန်းဇော်ကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာက ၀င်းဖေ လို့ ထင်ပါတယ်…။
မင်းသမီးက ခင်သီတာထွန်း …။ စက်ဘီးကလေး ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ပါ…။
ရုပ်ရှင်မင်းသားဘ၀နဲ့တော့ ထူးခြားတဲ့ အောင်မြင်မှုကို မရခဲ့ပါဘူး…။
နောက်တစ်ခုက သိန်းဇော်က အောင်မြင်တဲ့ သီချင်းတွေကို ဆိုခဲ့ပါသေးတယ်…။
ဂီတနက်သန်ကိုစောညိန်း သီချင်းတွေကို သိန်းဇော် မက်မက်မောမော ဆိုခဲ့တယ်လို့ မှတ်မိနေပါတယ်…။
မြန်မာသံ သီချင်းတွေမှာတော့ သိန်းဇော်က အောင်မြင်တဲ့ အဆိုတော် တစ်ယောက်ပေါ့…။
ဒါလောက်နဲ့ ဇာတ်မင်းသားလေးဟာ မကျေနပ်နိုင်…၊ မယောင့်ရဲနိုင်ခဲ့ပါဘူး…။
စတီရီယိုသီချင်းစီးရီးတစ်ခွေလုံးကို သုခမိန်လှိုင်ကြီးလက်အပ်လို့ စီးရီးတစ်ခွေ ထုတ်ခဲ့ပါရောလားဗျာ…။
အဲဒီမှာတော့ သိန်းဇော် က နာမည်ပြောင်းပြီး ကေဇော် ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပါ…။
စီးရီးတိုင်တည်က ကမ္ဘာမြေကို သင်ယူခြင်း…တဲ့…။
ဇာတ်မင်းသားလေး မောင်သိန်းဇော် ရဲ့ လောင်းရိပ်အောက်က ရုန်းထွက်ခြင်တဲ့ သဘောလို့ ထင်ပါတယ်…။
စာနယ်ဇင်းတချို့ရဲ့ ကြိုတင်ရေးသားမှုတွေအရ ကေဇော် ဆိုတဲ့ စတီရီယို အဆိုတော်ဟာ…
ဇာတ်မင်းသားလေး သိန်းဇော် ပဲလို့ ပရိသတ်တွေက ကြိုတင်သိခဲ့ကြပါရောလားဗျာ…။
စတီရီယို အဆိုကျော် ကေဇော် တစ်ဖြစ်လဲ မောင်သိန်းဇော်ဟာ သူ့စီးရီးတိုင်တည်အတိုင်းပါပဲ…။
နောက်ထပ် မောင်သိန်းဇော်ရဲ့ ထူးခြားမှုကတော့ မဂ္ဂဇင်းတွေထဲမှာ ကဗျာတွေ ရေးခဲ့တာပါပဲ…။
ဒါ့အပြင် ဇာတ်ခုံပေါ်ကနေ သူ့အသံ ချွဲချွဲ ၀ါဝါ ကြီးနဲ့ ကဗျာရွတ်ပြတတ်ပါသေးတယ်…။
အဲဒါကပဲ တခြား သူနဲ့ ခေတ်ပြိုင် ဇာတ်မင်းသားတွေထက် ထူးခြားစေခဲ့တာပါ…။
အဲဒီ ကဗျာဆရာ မောင်သိန်းဇော်ရဲ့ ကဗျာရေးလက်ဟာ ထိပ်တန်းပါပဲလို့ ကျွန်တော် မိတ်ဆွေကြီး ကိုကြွက်နီ က
ကဗျာဆရာ မောင်သိန်းဇော်ကတော့ လူရိုသေ ရှင်ရိုသေ ကဗျာဆရာ ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးပါတယ်…။
အခုပို့စ်က မောင်သိန်းဇော်ရဲ့ ကဗျာတွေအကြောင်း ချီးမွမ်းခန်းဖွင့်မယ့် ပို့စ် တစ်ပုဒ်မဟုတ်ပါဘူး…။
၁၉၉၅ ခုနှစ်ထုတ် ပိတောက်ပွင့်သစ်မဂ္ဂဇင်း ထဲမှာ ပါခဲ့တဲ့ မောင်သိန်းဇော်ရဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ပါခဲ့တဲ့ စကားလေး
တစ်ခုကို ကြိုက်လွန်လွန်းလို့ ကိုးကားချင်တာပါဗျာ…။
ကဲ နည်းနည်း ဖတ်ကြည့်ပါဗျာ…။
“ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်…။ ကဗျာဟာ ကျွန်တော့်ဘ၀နဲ့ အံဝင်ခွင်ကျ မဖြစ်တဲ့ စိတ်ကူး ရမ္မက်တွေအတွက် သီးသန့်နေရာတစ်ခုကို
ရှာဖွေပေးခဲ့သူပါပဲ…။ အဲဒါကိုပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ် နာမည်အဖြစ် မှည့်ပေးဖူးပါတယ်…။
ဆိုလိုတာက ကဗျာဆိုတာ ဇာတ်မင်းသားလေးသိန်းဇော်ရဲ့ သီးသန့်နေရာလေးတစ်ခုပါတဲ့…။
ခင်ဗျားတို့ …၊ ကျွန်တော်တို့…ရဲ့ သီးသန့်နေရာလေးတစ်ခုက မန္တလေးဂဇက် ဆိုတဲ့ ဟောဒီရွာကြီးပါပဲ…။
မန္တလေး ဂဇက်ဟာ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ ဘ၀တွေနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျ မဖြစ်တဲ့ စိတ်ကူးရမ္မက်တွေအတွက်
သီးသန့်နေရာတစ်ခုကို ရှာဖွေ ပေးခဲ့ပါတယ်…။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘ၀တွေထဲက ခံစားချက်တွေ၊ အသိအမြင်တွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေကို ဖလှယ်ဝေမျှနိုင်တဲ့
သိတ်ပြီး အတိတ်သရ၀ုတ္တိ ရာ ကျသွားမလားတော့ မသိပါဘူး…။
မန္တလေးဂဇက်က စာရေးနေကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဟာ
ကျွန်တော့်တို့ကိုယ် ကျွန်တော်တို့ ခိုးယူပေါင်းသင်းနေကြသူတွေ ပါပဲလို့ တင်စားလိုက်ချင်ပါတယ်…။
ခိုးယူပေါင်းသင်းပီးရင်မပီးဘု ခည …
မိဘပြန်အပ်တာတေ အတည်တကျ လက်ထပ်တာတေ ကျန်သေးရဲ့ …။
Virtual World ကို ဖွဲ့ပုံလေး အတော်လှပါကြောင်း အတည် မန့်ခဲ့ပါရဇီဗျာ
@ နန်းဂီဂီ ဂျိုးဇက် ;
ပထမဆုံး တက်လာတဲ့ ကွန်းမန့်လေးအတွက် ကျေးဇူးအထူးပါ ဂီဂီရေ…။
Virtual World ကို ဖွဲ့ပုံလေး အတော်လှပါကြောင်း
ဆိုတာလေးနဲ့တင် ဒီပို့စ်ကို တင်ရကျိုးနပ်သွားပါပြီ…
David Beckhm နားပြီတဲ့.
လ်ကတွေ့ဘဝမှာ သူ့ကို မတွေ့နိုင်တဲ့ ကျနော်တို့အဖို့တော့
မြက်ခင်းစိမ်းတွေကို ဂြိုလ်တုကတဆင့် ဖန်သားပြင်ကတဆင့်
မြင်တိုက်ရိုက်မြင်တွေ့နေခွင့် virtual world တခုထဲကနေ
သူ လက်ပြသွားခဲ့ပြန်ပြီ ပေါ့ဗျာ.
အိုဘယ့် virtual world.
Bye bye DB7.
ဇာတ်မင်းသားလေး သိန်းဇော်သိန်းဇော် တိုင်းရှေ.ကကျော်…
မြန်မာသဘင် စင်မြင့်ပေါ် တင့်တင့်တယ်တဲ့ ထယ်ဝါလှပေါ်… 2
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကလဲ ဦးသိန်းဇော် ကတဲ့ဟာကြည့်ဖူးတယ်… ပန်းတွေပိုက်ပြီး သီချင်းဆိုတာလေ…
ဒါနဲ.စကားမစပ် မိမိကိုယ်ကိုယ်ခိုးယူပေါင်းသင်းနေတဲ့ ပန်တြာ ဘလက်ချောကြီး… သများကို အပျော်ကြံသွားတယ်…. လာမယ်ဆိုလို.ဒီက စောင့်လိုက်ရတာ.. လက်ထဲမျာ ၀က်အူလှည့်ကြီးနဲ…. ဟွင်းဟွင်း
သောကြာ ညကတည်းက နေပြည်တော် ရောက်နေရသူရယ်ပါကွယ်…။
၀က်အူလှည့်ကြီး အသုံးချဖို့ ရောက်အောင်လာခဲ့ပါ့မယ်ဗျာ…။
လှပခန့်ငြားတဲ့ စာတစ်ပုဒ် ဖြစ်လာရတာပေ့ါ။
Bravo ပါ စာရေးဆရာကြီး။ :hee:
ကွန်းမန့်လေးနဲ့ အားပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ မမရေ…။
မိမိကိုယ်မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်း နေမိတဲ့ သဘောပါဗျာ…။
မန္တလေး ဂဇက်ဟာ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့ ဘ၀တွေနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျ မဖြစ်တဲ့ စိတ်ကူးရမ္မက်တွေအတွက် သီးသန့်နေရာတစ်ခုကို ရှာဖွေ ပေးခဲ့ပါတယ်…။
အမြဲမျှော်လျှက်။… ဘာမန့်ရမှန်းမသိလို့ ကဗျောင်လေးရေးလိုက်ပါဂျောင်းးးး
အဲဒါလေးကို ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ မန္တလေး ကိုသိန်းဇော် ကိုသာ ချီးကျူးပါဗျာ…။
သူ့အတွေးလေး ကျွန်တော်က ကြိုက်လွန်းလို့ ဝေမျှလိုက်တာပါ…။
ခိုးယူပေါင်းသင်းပြီးရင် ပြန်အပ်ဖို့ မမေ့နဲ့ဦး ဗျို့…။
စာသားလေးက တော်တော့်ကိုလှတာပဲ …
မနေ့က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောဖြစ်ရင်း သူ့ကိုမေးမိတယ် … ဘာလုပ်ရတာကို စိတ်အချမ်းသာဆုံးလဲလို့??? သူကလဲ ပြန်မေးတယ် .. နင်ရောတဲ့ ???
ဒီလောက် ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုကို သေချာမဖြေနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး … ဟိုဟာလိုလို ဒီဟာလိုလိုနဲ့ .. နောက်ဆုံးတော့ တူညီတဲ့အဖြေတစ်ခုနဲ့ အဆုံးသတ်သွားတယ် … ကျွန်မကတော့ ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်နေရတာကို စိတ်ချမ်းသာမိတယ် … (နေ့တိုင်းတော့မဟုတ်)
အဲဒီတော့ … တစ်ခါတစ်လေ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ မိမိကိုယ်မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းမိနေတာပေါ့နော် …
ကိုသိန်းဇော်ရဲ့ အတွေးလေးတစ်ခုက ဆင့်ပွားလာလိုက်တာ…။
ကျွန်တော်က မန်းဂဇက်မှာ စာရေးခွင့်ရနေတဲ့ ဘ၀လေးကို
မိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူ ပေါင်းသင်းခြင်း ရယ်လို့ ဆင့်ပွားတွေးယူလိုက်ပါတယ်…။
မဝေက မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်နေရတဲ့ ဘ၀လေးကို
မိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းခြင်း ရယ်လို့ ဆင့်ပွားတွေးယူလိုက်ပြန်တယ်…။
အဲဒါကိုက ကဗျာပါပဲ မဝေရေ…။
ဒီည.. မန္တလေးသိန်းဇော်နဲ့.. ဒင်နာလုပ်ရင်း.. အင်တာဗျူးဖို့ချိန်းထားတာ.. ဇတ်တိုက်မှာမို့ဆိုပြီး..ငြင်းလိုက်လို့မဖြစ်လိုက်ဖူး..
လေဒီခိုင်ကတော့…မန္တလေးသိန်းဇော်က.. သူ့ကဗျာစာအုပ်လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုလို့.. ပျော်နေလေရဲ့..
ပညာရှိ သတိဖြစ်ခဲမို့ သတိပေးတာပါ သဂျီးရေ။
ဇာတ်မှာ ရေးချ ကျန်ခဲ့တယ်။ :harr:
ဒါက ဘိုသံ ပါတွားလို့ပါလေ။
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့…၊ နေပြည်တော်က စာအုပ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ
မောင်သိန်းဇော် ရဲ့ တောင်ကုန်းအဟောင်းများ ဆိုတဲ့
စာအုပ်နောက်ပိုင်းမှာ မောင်သိန်းဇော်နဲ့ အင်တာဗျူးအဟောင်းလေး
၁၅၀၀ တန် ကဗျာစာအုပ်လေး ၀ယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်…။
ပြီးတော့ ဒီပို့စ်ကို ရေးဖြစ်သွားပါတယ်…။
မနက်ဖြန် (၁၉-၅-၂၀၁၃) မွန်းလွဲ ၂ နာရီကနေ
ညနေ ၆ နာရီအထိ
ဖိုးကာ၊ စိန်ဝင်းထွန်း၊ စိုးမြတ်သူဇာ၊ ခိုင်သင်းကြည်၊
သဲနုဝါ တို့ ဂီတမှူး နိုင်ဇော် တီးဝိုင်းအဖွဲ့နဲ့အတူ
ဖျော်ဖြေကြမယ် ဆိုတဲ့ သတင်းလေးလည်း
(အင်း…အခုတော့ အိုကြီး အိုမ ဖြစ်နေပါပြီ)
အခုထိ အားပေးနေသေးတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း
မောင်သိန်းဇော်က လေဒီခိုင်ကို ပေးမယ့် ကဗျာစာအုပ်က
တောင်ကုန်းအဟောင်းများ ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေး
ဖြစ်ဖို့များပါတယ် လို့ အကြားအမြင်မရပေမယ့်
မန်းလေးသိန်းဇော်ဆိုတဲ့ ချစ်ပြုံးနှင်းဆီကို အရမ်းသဘောကျတယ်ဗျာ။
မူရင်း အဆိုတော် ဘဒူလဲတော့ သေချာမသိ။
အော် ကိုယ့်ကိုယ်ကို တောင်ပြန်ပီး ခိုးယူပေါင်းသင်ရတယ်တဲ့လား… ပြောင်မြောက်လိုက်တဲ့ ရသအတွေးလေး… :hee:
စကားမစပ်… ယူဇာနိမ်းက အော်တိုချိန်းတတ်သလားဗျာ…
အခုတညိုး တော်ကျာတညိုးတေ ဖစ်ကုန်လို့..
ကကြောင်ကြီး လဲ အော်တို နာမည်ပြောင်း သွားလို့ အမြီးနင်းခံရသလို အော် နေတယ်။
ရွှေအိက ကြည်ပြာ လား။
ကြည့်ရတာ “က” နဲ့ စတဲ့ သူတွေ ပြသနာ နဲ့ တိုး ကုန်သလားဘဲ။
Index ပြသနာ ဆိုရင်ပေါ့။ အထင်။
ယူဇာနိမ်း အော်တိုချိန်းသွားတာ ပယောဂလို့ ထင်ပါတယ်…။
ဒီဘက်က စာသားတွေ ဟိုဘက်မှာ ခိုးချမိနေပါရောလား။
ဟိုဖက်မှာ မန့်ပြီး ဒီဘက်ဝင်အလာ ဟိုဘက် က စကား အတွေး တွေ နဲ့ တစ်ထပ် ထဲ ကျသွားတဲ့ စာတွေမို့ ပြုံးမိသွားတယ်။
ပိုပြီး လှ တဲ့ စကား အတွေး တွေ အတွက် သဘောညီမျှ ရှိလှပါတယ် ကဘချောရေ။
ဘာကျူရယ် ကမ္ဘာ ထဲ (ဒီထဲ မှာ မောင်ဂီ က သုံး ခဲ့ပြီ) က ပြန်ထွက်ဖို့ မလွယ်တာကို သတိပြုမိချိန် ဆေးကု၍မရပါ ဖြစ်နေအောင် လွန်နေတာ သတိပြုမိလိုက်တယ်။
မန္တလေးသိန်းဇော် ကိုတော့ စိတ်ထဲ သိပ်ပြီး မရင်းနှီးလှဘူး။
မန်းသလေးသိန်းဇော်ရဲ့ ကိုစောညိမ်းသီချင်းတွေပြန်ဆိုတာ အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ သူ့အသံကိုလဲကြိုက်ပါ တယ်။ လေးဘလက်ပြောမှပဲ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ဘယ်နားမှာခိုးယူပေါင်းသင်းနေသလဲလို့ပြန်တွေးမိပါတယ်။ မိသားစုရေးဆိုတဲ့ ၀ဲဂယ်ကထဲမှာခြာခြာလည်ရင်းနဲ့ပဲ အချိန်တွေ အသက်တွေကိုခိုးယူပေါင်းသင်းနေတယ်လို့ ပဲထင်မိပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လင်ရေးသားရေးမိဘရေးတွေပူပန်ရင်း အခုဆို အသက်ကလဲ ဘ၀ တ၀က်ကျိုးဖို့ သိပ်မလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပေးခေါင်းလောင်းသံလေးတွေ အခုတလော မည်လာလို့ပါပဲ။
အင်း ခင်ခ အတွက်တော့ မန္တလေးဂဇက်က စွဲမက်စရာ နေရာ(ရွာ) တစ်ခုပါဘဲဗျာ။
ကိုဘလက်ပြောသလို ခိုးယူပေါင်းသင်းနေကြသော အပေါင်းအပါတွေကလည်း ရှိပေသကိုး။
အဖေါ်က ကိုခင်ခ ပေါ့ဗျာ…။
မန္တလေးသိန်းဇော်ရဲ့ ပရိတ်သတ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသူမို့ သူ့အရေးလေးဖတ်ရတာ
ကေဇော် ဆိုတဲ့ အဆိုကိုလက်မခံနိုင်ခဲ့ဘူး…တစ်ချို့ကဗျာတွေလဲ နားမလည်နိုင်ခဲ့ဘူး…
ကျမကတော့ သီချင်းအေးလေးတွေအတွက် သူ့ကိုချစ်ခဲ့ဖူးတယ်…
ငယ်ငယ်က အင်မတန်ကြိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့ မောင်သာပြည့် ၀တ္ထုတစ်အုပ်ဖတ်လိုက်ရတဲ့
အဲဒီခံစားမှုလေး ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ကွန်းမန့်ပိုင်ရှင် မအိ ကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်…။
ခိုးယူပေါင်းသင်းတာ ကနေ ဆက်တွေးမိလို့ ပြန်ဝင်လာတာ။
တစ်ခါတစ်ခါ ဒီ ဘာကျူရယ်အထဲ ကို ဝင်ရတာ အပြင်က ကိုယ့်ကို အလိုမတူဘဲ မုဒိန်း မကျင့်မိအောင် စိတ်ထိန်းနေရတာလဲ မဟန်ပါဘူး ကဘချောရယ်။
တစ်ခါတစ်လေ စိတ်လွတ် သွားတာမျိုး မဟန်ဘူး။
အခုဘဲကြည့် စိတ်ထိန်းမရ ပြင်ဝင်လာတာ။
အပြင်က ကိုယ်နဲ့ ဘာကျူရယ်ထဲက ကိုယ်
ဟန်ချက်ညီအောင် ထိန်းနေရတဲ့ ဘ၀တူခြင်းမို့
ဒီပို့စ်အတွက် အစ်မရဲ့ ကွန်းမန့်လေးအတွက်ရော…၊
ဒီပို့စ်နဲ့ မဆိုင်တဲ့ ကိုပေါက်ကြီးနဲ့ ဂီဂီ တို့ ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကြားမှာ
ပွင့်လင်းရဲရင့်တဲ့ အစ်မရဲ့ ကွန်းမန့်လေးအတွက်ရော…၊
ပြီးတော့ ကျန်းခန့်သာလို့ မာပါစလို့ သာကြောင်း မာကြောင်းလေး မေးပါရစေ…
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့….ဂေဇက်ရွာ ကြီးဆိုတာရှိလို့ ကိုဘလက်ဆိုတဲ့ ရန်ကုန်သားနဲ့ ကျနော်ဆိုတဲ့.. တောသားတွေ့ကြတယ်…စကားတွေပြောဖြစ်ကြတယ်ပေါ့..ဒီလိုတွေ..ဒီလိုတွေ….ပေါ့..
ဒါကြောင့်..ဘယ်လိုပဲ ဆိုဆို..ဘယ်လိုပဲ ပေါင်းရ..ပေါင်းးရ….ကျေနပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းးးးပြောပါရစေခင်ဗျ….
ကျန်းခန့်သာလို့ မာပါတယ် ဗျာ…။
မိတ်ဆွေကြီးရော ကျန်းမာချမ်းသာ ရှိပါစ…။
ဘလက်ကြီးက ရန်ကုန်သား မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ…။
ပုသိမ်မှာမွေးပြီး အင်းမမြို့မှာ ကြီးခဲ့ရတဲ့ တောသားလေးတစ်ယောက်ရယ်ပါ…။
ကျွန်တော့်တို့ကိုယ် ကျွန်တော်တို့ ခိုးယူပေါင်းသင်းနေကြသူတွေ ပါပဲ
ကျမ ကမိမိကိုယ်မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းလို့မရသေးဘူး။ ပို့စ်ရေးဖို့စဉ်းစားတိုင်း အကြောင်းအရာတွေရှုပ်ထွေးပြီးဆက်လို့မရတာ့ဘူး။
@ lele kyi ;
မိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းနေကြောင်း…
ဒီကွန်းမန့်လေးက သက်သေပါပဲ လီလီကြည်ရေ…။
စာ၊ ကဗျာ ခံစားမှု နားလည်မှု ကဗျာရေးမှု စာရေးမှု တွေအကြောင်းကို
ပြောတာထင်ပါရဲ့ ကျုပ်တော့ သိပ်နားမရှင်းဘူးဗျာ…………
ဒီပို့ကို ဖက်ရင်း “မိမိကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို
အကြိမ်ကြိမ်ရွတ်ကြည့်ပေမယ့် မအီမလည် နဲ့သာ အားပေးသွားရပါကြောင်းးးးးးးးးးးးးး
@ ဥက္ကဌ (ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး) ;
မအီမလည်နဲ့ သာ အားပေးသွားရတယ်ဆိုလို့
စိတ်မကောင်းပါဘူး ဥက္ကဌ ရယ်…။
နားမရှင်းပေမယ့် ၀င်ပေးသွားတဲ့ ကွန်းမန့်လေးအတွက်
အချိန်ကလေးရအောင်ယူပြီး ကိုယ်နဲ့ ကိုယ်နဲ့ ချိန်းချိန်းတွေ့မိတော့သဗျာ…။
အဲသလိုပြောရရင် – ဂဇက်က ကျုပ်အတွက်တော့ ကိုယ်နဲ့ ကိုယ်ရဲ့ ချစ်ရိပ်မြုံလေးပေါ့…
ဂဇက်က ကျုပ်အတွက်တော့ ကိုယ်နဲ့ ကိုယ်ရဲ့ ချစ်ရိပ်မြုံလေးပေါ့…
မောင်သိန်းဇော်ထက်တောင် ကဗျာ ဆန်နေပါရောလား ကိုပါကြီးရေ…။
ကိုဘချောရဲ့ ပိုစ့်လေးကို ရင်တွင်းဖြစ်ကဗျာလေးနဲ့ ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်
နိုဗွီရဲ့ ယူဇာနိမ်းက ဘဇာကြောင့် အောတိုချိန်သွားလဲမသိပါဘူးတော်
အဲ ဟုတ်တယ်မနိုရေ..ပြောင်းကုန်တယ်တော့ .. ဟိဟိ ပြန်ပြောင်းလို့ ရလားတိဘူးးး
ဟိုမင်းသမီးနဲ့ စေ့စပ်ပြီး အကယ်ဒမီ တစ်ခုရလို့ တဘောမတူဘူးဆိုလားဘာလားးးး
မိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူ ပေါင်းသင်းတယ် ….. တဲ့ …
ကျနော့် အတွက်တော့ …
အပြင်က စတိုင်နဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ ပုံစံနဲ့
ဟောဒီ ဂဇက်မှာ ချစ်သူတွေ ဖြစ်နေဂျဘာဒယ်လို့ …
အသွင် မတူ အိမ်သူ မဖြစ်ဆိုဘေမယ့် …
ခု ဖြစ်တယ်ဂျ … ဟီးးး
အံစာတုံး ၂ ကိုယ်ခွဲပေါ့…။
အံစာတုံး စရိုက် ၂ မျိုးပေါ့…။
မနေ့ က စပြီးခိုးတဲ့  အနေနဲ့  စာတစ်ပုဒ်ရေးတင်မိတယ် ။
ခိုးပြီးမှတော့တာဝန်ရှိလာပြန်ပြီပေါ့။
တကယ်ပဲ လေထုထဲကမိတ်ဆွေတွေအတွက် ရိပ်မြုံလေးပဲကိုး
ကျုပ်က ခိုးပြီးရင်ပေါင်းရမှာကြောက်လို့ အဝေးကပဲ ကြည့်နေတာပါ
ဟိုးးးး ရှေး ရှေးလို
ဝေးဝေးကသာ လွမ်းပါမည် လို့ 
ကွန်းမန့်လေး ၀င်ချီးမြှင့်ပေးသွားတာ ကျေးဇူးအထူးပါ ဗျာ…။
မိမိကိုယ် မိမိ ခုိးယူပေါင်းသင်းတာတောင်မှ တစ်ခါတရံမှာ ခိုးမူ့ နဲ့ အကျုံ့းဝင်တယ်လို့
အခုတော့ မိမိကိုယ်မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင့်တဲ့အကြိမ်တွေလျော့ကျအောင်
ကွန်းမန့်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုပေါက်ရေ…။
ကျွန်တော်က ပိုမယ် ထင်ပါတယ်ဗျာ…။
သတင်းစာထဲမှာ ပြူးပြူးပြဲပြဲ ကြော်ငြာခဲ့ဘူးတဲ့…
နိုင်ငံခြားပြန်စတိတ်ရှိးမင်းသား မိုးမင်း တို့လို
အမေရိကားပြန် ဖြစ်လာတော့မယ့် ဇာတ်မင်းသားလေး မောင်သိန်းဇော် ကို
ဒီပို့စ်လေးက ကိုပေါက်ကို စိတ်အနှောက်အယှက်တစ်စုံတစ်ရာ
ဖြစ်စေခဲ့တယ်ဆိုရင် ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ ရင်းရင်းနှီးနှီး ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ…။
ဘယ့်နှယ့်ဗျာ. အားတိုင်းယားတိုင်း လာလာခလုပ်တိုက်သကိုးးး
မပြောချင်လို့ ရေးပီးမှ မတင်ဖြစ်တဲ့ ကော်ပီရိုက် ကိစ္စလေးပြန်ပြောပါအူးမယ်လေ.
တနှစ်ကျော်ကြာပြီ ဖြစ်တယ်. အမေရိကမှာ အစိုးရက အင်တာနက်ဆင်ဆာရှစ်ပ်
လုပ်မယ်ဆိုလို့ ဝီကီ က တရက်အမှောင်ချတာ. လူတွေဝိုင်းဝေဖန်ကြလို့
အစိုးရက တိုးမယ့်ဆင် တလှမ်းဆုတ် လို့ လျှော်ပေးခဲ့တယ်.
မကြာပါဘူး. ကင်ဒေါ့ကွမ် ရဲ့ ကမ္ဘာ့အထွားဆုံး ဟိုစတင်ဆိုက်ဒ် ပျက်ကျသွားပြီး
အဲ့ အတ္တဘော အဖမ်းခံရပါကောလား. (သည်အကြောင်း ကျနော် ရေးခဲ့ဖူးပြီးဖြစ်)
အဲ့သည့်နောက် လွန်ခဲ့တဲ့ခြောက်လလောက်က ပန်းသီးထုတ်ကုန်တွေကို.
ခိုးဝှက်ဖောက်ကားနေတဲ့ အင်စတောလပ်စ် ဆိုတဲ့ နာမည်ကျော် နေရာတခုလည်း
ပိတ်သိမ်းလိုက်ရပါပကောလား ( ဒီအကြောင်း ဖက်တီးကတ်ရေးပြီးဖြစ်)
နောက် သုံးလလောက်အကြာမှာ အမေဒစ်ကင်န် တေးဂီတ ထုတ်လုပ်သူအဖွဲ့ နဲ့
ရုပ်ရှင် ထုတ်လုပ်သူအဖွဲ့တွေက. အင်တာနက်ဆားဗစ်ပရိုဗိုက်ဒါတွေနဲ့ သဘောတူညီမှုတခု ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်.
အဲ့ဒါကတော့ ကျနော် ဘာသာပြန်ခဲ့ပြီး မတင်ခဲ့တဲ့ ပိုစ့်ပါပဲ.
အဟွာတွေ. မတင်တော့ဘူး ဆိုလာတာရယ်. စကားနည်းရန်စဲချင်တာရယ်ကြောင့်ပါ.
ကော်ပီရိုက်ကိစ္စ စကားစပ်တိုင်း ရော စကားမစပ်လဲပါ ရွာ့ လူကြီးတွေကြားက
တိုင်ပင်စာတွေမှာရော. ပိုစ့်အားဖြင့်သော်လည်းကောင်း. ကောမန့်အားဖြင့်သော်လည်းကောင်း ခနခန တဖွဖွ အခဲမကျေ ဖြစ်နေပုံရလို့. ပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံး ရေးလိုက်ပါရဲ့ဗျာ.
ကိုယ်ပိုင်အသိနဲ့ ၂ကြိမ် သည်းခံပါကွာလို့ လူကြီးတွေတားတာ ၂ကြိမ် ရှိပြီမို့.
သည်တခါထပ်တွေ့ပြန်တော့ ကိုယ်ကပဲ မမှန်တာ ရေးခဲ့ပြောခဲ့သလို ဖြစ်မစိုးကြောင့်
မြန်မာပြည် အလိုအရဆို အမ်ပီတီလို. ရက်လင့်ခ် လို နေရာမျိုးပေါ့ဗျာ.
ယူအက်စ်မှာတော့ စပရင့်လို ဗယ်ရီဇွန်လို ကန်ပနီတွေပေါ့.
အဆိုပါကန်ပနီတေကို အနုပညာရှင်တွေက အခု ဘယ်လိုစာချုပ်သလဲဆိုတော့.
Copyright warning system လို့ ရှာကြည့်ရင် တွေ့ရမှာပါ.
ခိုးထားတဲ့ ကူးထားတဲ့ သီချင်း ရုပ်ရှင် စတာတွေကို. တင်တာ ဒေါင်းတာ တွေ့ရင်
၁- သတိပေးစာပို့ပါမယ်. တဲ့. အဲ့ဒါမှ မရပ်သေးရင်
၂- အင်တာနက်ကော်နက်ရှင်စပိ ကိုချပစ်လိုက်ပီး. ပုံမှန်စပိပြန်ရချင်ရင် အွန်လိုင်း ပညာပေး
မူဗီ သော်လည်းကောင်း ကြည့်စေပြီးမှ ပြန်ဖွင့်ပေးပါမယ်တဲ့ ရက်သတ္တပါတ်လောက်
တော့ကြာမယ် ဆိုပါတယ်. ဒီအဆင့်မှာ မရပ်ပြန်ရင်တော့
၃- တရားခွင် ပို့ပါမယ် တဲ့ အဆင့်ဆင့် ရပ်တံ့ဖို့ အသိပေးပြီးတော့မှ အခုအဆင့်ကို
သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်. အမှုက ခိုင်မာစွာတည်ဆောက်ပြီး ဖြစ်နေပါပြီ တဲ့.
ဒါတွေက အသစ်ပေါ်လာတာတွေပါ. ၂၀၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေက အားမကောင်းခဲ့တဲ့
မထိရောက်ခဲ့တဲ့ ကော်ပီရိုက် ဥပဒေတွေကို မွမ်းမံတာပါလို့လည်း ဖော်ပြပါရှိပါရဲ့.
၁- ဟောဒိ ဂဇက် ဟာ အများပိုင်နေရာဖြစ်နေတာ.တစုံတယောက်ကြောင့် မပျက်စီးသွားစေချင်တာ.
၂- သူများတွေလည်းတင်တာပဲ ငလည်းငလုပ်ချင်ရာလုပ်မှာပဲ စိတ်ဓါတ်နဲ့.
မဆီမဆိုင် အမေရိက မှာ တည်တဲ့ဆာဗာ နဲ့ သဂျီး ပလိန်းကြီး ဒုက္ခရောက်မှာ
၃- သဂျီးဆိုလို့ ဖားတယ် မထင်ဘာနဲ့ မျက်စိပျက်တာ ကိုယ်ပိုင်အချိန်လျော့တာချင်းတူတူ
ကျုပ်ဘယ်လောက်ရေးရေး တပြားမှ မပေးသူကို အချိန်ကုန်ခံ ဖားနေစရာ မလိုဘု ထင်ပါတယ်
ပြောသင့် ရေးသင့်တာကို ပြောတယ် ရေးတယ်ပဲ မှတ်ကြပါဗျို့
ယနေ့ကမ္ဘာက ကော်ပီရိုက်က်စ္စ ဇောင်းပေးလာကြတယ် အစိုးရအပါအဝင်
လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေက သတိပြုပြင်ဆင်လာကြတယ်ဆိုတာ အထက်ကကိစ္စရပ်တွေကို
ထောက်ချင့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်ဗျို့. မင်းကောကင်းနိုင်လို့လားး. ကင်းခဲ့လို့လားး လာရိတာဖတ်ဖူးရဲ့
ဟုတ်ကဲ့ ဘယ်မှာနေလို့တို့ဘာကြောင့်တို့ ကင်းခဲ့သလားတို့က ကိစ္စရပ်မဟုတ်.
လက်ရှိအသစ်ပြောင်းလဲလာတဲ့ ဝန်းကျင်မှာ ကင်းဖို့က အဓိကဗျ.
အရင်ကတည်းက အလုပ်စားပွဲမှာ ဆေးလိပ်ခွက်ချပြီး ဆေးလိပ်သောက်လာတာ.
ယနေ့ခေတ်ခေတ်ပြောင်းတော့ ဆေးလိပ်သောက်ရတဲ့ ဇုံ( အခန်း) တွင်းကလွဲရင် ဆေးလိပ်သောက်ခွင့် မရှိတော့ သလိုပေါ့ဗျာ.
ငဆေးလိပ်ခွက် ငစားပွဲပေါ်ဆက်ထားမယ်. လောကကြီးဘာပြောင်းပြောင်း ငလုပ်ချင်ရာငလုပ်မယ်
ဆိုရင်တော့. အင်းးးးးး. ထားပါလေ. ဆက်ဆွဲပါအူးမယ်.
ဒီနေရာမှာ. မိတ်အင်ယူအက်စ် ပဲ အကျုံးဝင်မှာပါကွာ လို့ဘွာခတ်မရစကောင်းဘူး.
SQL အခြေခံသိတဲ့လူ မေးကြည့်ရင် ရနိုင်ရဲ့ဗျ. ဒီလူတွေ ဘာကိုဘယ်လိုခြေရာခံတယ်
ဆိုတာ. နောက်တချက်မမေ့စကောင်းတာက. အလကားရတဲ့ အီးမေးလ်မှာ SNS မှာ
ကိုယ်ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ ထည့်ထား သွင်းထားသမို့.
ကျိမ်းသေပေါက် ဒုက္ခများနိုင်မယ့်ကိစ္စပါဗျို့. ကိုယ့်ဟာကိုယ်မမှုလို့ လုပ်တာ(ကိုယ်ပိုင်စပေ့စ်မှာ)
ကတော့ကိုယ့်ကိစ္စမို့ မပြောပါဘူးးးး ကိုယ့်ဟာကိုယ် သတ်သေတာ ရိုးရိုးမသေဘဲ အိမ်ကိုမီးနဲ့
ရှို့လို့ တရပ်ကွက်လုံး ပြာကျမယ့်အရေးမို့လို့ပါဗျာ.
အချုပ်ပြောရရင် ကိုယ်မပိုင်တဲ့အရာကို ကိုယ်စိတ်ကြိုက် စီမံခန့်ခွဲတာက.
လက်သင့်မခံနိုင်စရာ ကိစ္စ ဆိုတာ ပါပဲ. တာဝန်ယူတယ် ရှင်းနိုင်တယ်. မကြောက်ဘူး
ဘာညာပြောတာက လွယ်ပါတယ်. တကယ်မလွယ်တာက
(ထားပါဦး)Owner က ခွင့်ပြုတယ် ခွင့်လွှတ်တယ် ထားဦး. လူတကာဂလိုပဲ လုပ်နေတာပဲ
ထားဦး. အများပိုင် space လည်းဖြစ် ဆန်းဆန်းတင့်လာတဲ့ခေတ်လည်းဖြစ်. လေတော့.
Me vs Owner မဟုတ်တော့ပဲ.
Me vs the Interneဖြစ်လာတယ် ခည.
ဆက်ဆွဲရရင်. မြန်မာပြည် အိုင်ပီအက်ဒွက်စ် နည်းနည်း လေးနော.
ဘန်းခံရရင် ပိတ်ခံရရင် ခံရမှာ ကိုယ် တယောက်တည်းမဟုတ်ဘု.
မြန်မာပြည် ဂီတလောကကလည်း ထုတ်ပြန်ချက် တခုနှစ်ဆန်းက ထုတ်ထားတယ်
ရုပ်ရှင်လောကကလည်း ဟိုစတင်ဆိုက်ဒ်တေကို သူတို့တင်ရောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်
ကုန်ကုန်ပြောရရင်. ဒါတွေမရှိလည်းပဲ. ကိုယ်မရှိတုန်းကိုယ့်အိမ်ပေါ်တက် ပီး
ကိုယ့်အဝတ်အစားတွေ သူများပေးပစ်တာမျိုး လုပ်ရင်တော့ ဘယ်သူမှ ကြိုက်မယ်မထင်.
ကြည့်လုပ်ပေါ့နော့. ခုလို ကွကိုယ် အပျော်တမ်းရေးတဲ့စာတောင် သူများ ကခိုးရင်
ရန်ဖြစ်တတ်ကြသေးတာ. သူများကော်မာရှယ် ရောင်းကုန်ကျတော့. အဟတ်.
(ဒီကိစ္စ သဂျီး တခုခုဝင်ပြောစေလိုပါတယ် )
ကိုယ်မပိုင်တဲ့ ပိုင်ရှင် ရှိတဲ့ သီချင်းတွေကို ကိုယ်မပိုင်တဲ့ (အများပိုင်အနေနဲ့) သတ်မှတ်
ထားရှိတဲ့ နေရာတခုမှာ တင်တာဟာ ပြဿနာ ဖြစ်လာစရာများတာမို့.
ဒါဟာ မလုပ်သင့်ပါဘူး လို့ပြောခဲ့တာ မှားမမှား ကိုပေါ့.
မှားတယ်ဆိုရင် ကျုပ်ပြောခဲ့သမျှပြန်ရုတ်သိမ်းပြီး တောင်းပန်ပါ့မယ်လေ.
သူကြီးမင်းတော့ ခေါင်းဆင်နင်း နေတယ်လို့ အိမ်မက် မက်နေလောက်ပြီ။
Admin Kai says:
ကျုပ်က.. စာပေ…အနုပညာ… ကဗျာ..သီချင်အကုန်ချစ်ပါတယ်..
အဖိုးလေးရော..အဖေရော..လေဒီခိုင်ရော…ကိုယ်တိုင်ရောစာရေးဆရာတွေမို့.. စာရေးဆရာတွေ(အဲဒီခေတ်က)စာရေးစားရင်.. ဆင်းရဲတာ.. ငတ်တာလည်းသိပါတယ်..
ပြောရရင်.. မြန်မာ့အနုပညာသည်တွေ.. သဘင်ပညာသည်တွေ.(တချို့).(နှစ်တိုင်း.. ) ယူအက်စ်ခေါ်နေတာ.. ကျုပ်နဲ့မိတ်ဆွေတယောက်..လွန်ခဲ့တဲ့..၇နှစ်ကပေါင်းထောင်ထားတဲ့… အသင်းအနေနဲ့ပါ..
အခုမန္တလေးသိန်းဇော်တို့အဖွဲ့လည်း.. အသင်းစပွန်ဆာဆိုပါတော့…။ (စကားချပ်..။ )
သူတို့အနုပညာ.. မြန်မာ့အနုပညာ… မူပိုင်ခွင့်တွေအတွက်.. ယူအက်စ်မှာ.. ကမ္ဘာမှာမှတ်ပုံတင်ပေးနိုင်ဖို့.. ကြိုးစားဖူးပါတယ်..
ဒီနှစ်ထဲ..ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးငှက်ကထ ယူအက်စ်ခေါ်ပါဦးမယ်..။ အဲဒီကိစ္စတွေတိုင်ပင်ပါဦင်္းမယ်..။
စာရေးဆရာကလည်း.. သူရေးတဲ့စာ.. မှတ်ပုံတင်ရုံးပို့.. မှတ်ပုံတင်ရတာပါ..။
မှတ်ပုံတင်ရုံးက.. ဘာမှထူးမလုပ်ပါဘူး.. နေ့စွဲတပ်သိမ်းထားလိုက်တာလို့..သိထားပါတယ်..။
မူပိုင်ခွင့် ပြဿနာဖြစ်လာရင်.. နေ့စွဲအရအရင်မှတ်ပုံတင်ထားသူ.. စားကြေးပေါ့…။
ရှေ့ကအရင်ရေးတာ.. နောက်ကရေးတာ.. မသိ.. မှတ်ပုံတင်နေ့နဲ့သတ်မှတ်ပုံ..ဆုံးဖြတ်ပုံရပါတယ်..
မြန်မာသီချင်း.. ဂီတ..ရုပ်ရှင်.. ကမ္ဘာတန်းအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်မထိုးထားပါ..
ရုပ်ရှင်ကိုမှတ်ပုံတင်ခိုင်းတာ.. တကား.. မှတ်မိသလောက်..၅၀၀ဒေါ်လှလောက်ကုန်မှာမို့.. မတင်ကြပါ..။ ခိုးချထားတာတွေပါ(ကောင်း)တာမို့.. ယုံကြည်ချက်မရှိတာလည်း… ပါပုံရပါတယ်..
မူပိုင်ခွင့်နဲ့ပါတ်သက်ရင်.. ဥပဒေ.. တရားတဘောင်ကိစ္စ… အင်မတန်ရှုပ်ထွေးပါတယ်..
သိသလောက်.. မြန်မာဇာတိနွယ်ထဲ.. မူပိုင်ခွင်နဲ့ပါတ်သက်တဲ့.. ရှေ့နေလုပ်စားနေသူ.. ယူအက်စ်မှာ.. မရှိသေးပါ..
ကော်ပီရိုက်.. ပက်တန့်နဲ့ပါတ်သက်တဲ့..လောစကူးသွားတက်သူတယောက်တော့.. လွန်ခဲ့တဲ့.. ၈နှစ်လောက်ကကြားဖူးတယ်..
ကျုပ်အနေနဲ့.. အတိအကျ.. နားမလည်ပါ…
သိတာကတော့.. မန်းဂဇက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ထဲတော့.. မူပိုင်ခွင့်နဲ့ပါတ်သက်တာတွေ.. ငြိနိုင်တာတွေ.. ရှယ်တာတွေ.. ပေးတာတွေ..( ပြောလာသူ..ထောက်ပြသူ.. သတိပေးသူရှိရင်).. တင်ခွင့်မရှိပါကြောင်း…. ရယ်..။
အဲဒါကြောင့်.. ကိုပေါက်လည်း..(ဟိုးတခါပြသနာဖြစ်တော့) တင်ပြီးသားကို.. ဖျက်ပေးသွားပါတယ်..
သီချင်း.. ရုပ်ရှင်..စာပေ.. အင်တာနက်ထဲအပြင်လောကမှာ.. ပါစင်နယ်..လေ့လာဖို့.. ပရိုမိုးရှင်းလုပ်တာ.. ရှားပါးလို့သိမ်းပေးဖြန့်ပေးတာ.. စသဖြင့်… (ဘယ်အကြောင်းပြချက်နဲ့မှ) ရှယ်ခွင့်.. ဖြန့်ခွင့်.. မရှိပါ..။
သတင်း.. စာမူ.. ဓါတ်ပုံ.. တပိုဒ်.. တပုဒ်.. ရှယ်ခွင့်မရှိပါ…။
ကိုးကားမှီငြမ်းပြီးရင်.. ခရက်ဒစ်တူ.. ဆိုပြီးလည်း.. လုပ်ခွင့်မရှိပါ… အဲလိုလုပ်လို့.. မူပိုင်ခွင့်ကနေလွတ်မသွားပါ…။
လုပ်ခွင့်ထဲ.. (အင်မတန်ပါးလှပ်လှပ်ကလေး..) ဖဲယူစ့်ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်..
အဲဒါမျိုး.. ဒီဟာမျိုး.. ဆိုတာတွေရှိပြီး.. အဲဒါတရားတဘောင်ဖြစ်လာရင်.. ရှေ့နေများအလုပ်ဖြစ်ပါကြောင်း…။
တရားရေးကို.. တရားသူကြီးကသာ.. ဆုံးဖြတ်ရ..ဆုံးဖြတ်သင့်ပါကြောင်း…
အရင်ကကြိုက်လွန်းလို့သုံးနေတဲ့ စတော်ဘယ်ရီသီးတောင် ဂူဂဲလ်ကရထားတဲ့ ပုံဖြစ်လို့
အဲဒီပိုစ်ကိုတင်တုံးက သီချင်းကလဲ တေးသံသွင်းဆိုင်မှာအလွယ်တကူဝယ်မရနိုင်တဲ့သီချင်း
ကောင်းပါလျက်နဲ့ပျောက်နေတဲ့ ခင်မောင်တိုး မွန်းအောင် ခင်ဝမ်းသီချင်းကို တင်ပေးတာ.။
အဲဒီအချိန်မှာကတည်းက အလွယ်တကူဝယ်မရတဲ့သီချင်းကို မတင်ဘူးလို့ ပြောပြိးသား။.
တင်ထားတဲ့သီချင်းနဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို သေချာမလေ့လာဘဲ
ကိစ္စတစ်ခုကိုဝေဖန်တဲ့အခါမှာ ဒီလူဘာအတွက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာ ကိုပါ
Ma Lynn updated the description.
၇၀ ၊ ၈၀ ၊ ၉၀ ခုနှစ်များက သီချင်းသည်များအကြောင်း
အဟောင်းတွေ ပြန်တူးဖော်ကြမယ် …
အထူးသဖြင့် ရှားပါး၊ မြှုပ်ကွယ်နေကြတဲ့
သီချင်းသည်တွေနဲ့ သူတို့ သီချင်းတွေပေါ့ …
အားလုံးသိတဲ့ အဟောင်းတွေ တတ်နိုင်သလောက် ပေးကြပါ …
• ”*စတီရီယို* တေးသီချင်းများနှင့် သီချင်းသည်များကိုသာ” ဆိုလိုခြင်း။
• ကာလမှာ ၇၀ ၈၀ ၉၀ ဖြစ်သည်အလျောက် ၇၀ ခုနှစ်မှ ၉၉ ခုနှစ် အထိသာ ။
• ဆိုလိုသည်မှာ ၇၀-၉၉ အတွင်း ပေါ်ထွက်လာသော သီချင်းသည်များသာ။
(သီချင်းသည်များ – တေးဖွဲ့သူ၊ သီဆိုသူ၊ တီးဝိုင်းများ၊ ဟာမိုနီ သီဆိုသူများ အပါအ၀င် သီချင်းဖြစ်တည်စေသောသူများ)
သီချင်းနှင့် မပက်သက်သော အကြောင်းအရာများ သော်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေး၊ ကြော်ငြာများ၊၊ ရုပ်ရှင်များ၊ မိမိကိုယ်တိုင်ဖန်တီးသောအရာများလည်း ဝေမျှမှုများလည်း မပြုပါရန်။
◘ အဖွဲ့ဝင်များသို့ မေတ္တာရပ်ခံစာ
ဤစာမျက်နှာပါ အကြောင်းအရာများ အားလုံးသည် …
လေးစားသောအားဖြင့် ဝေမျှသူနှင့် အဖွဲ့ကို ဖော်ပြပေးပါရန်။ ***
”၇၀ ၈၀ ၉၀ ခုနှစ် သီချင်းသည်များ” အဖွဲ့မှ သီချင်းဟောင်းများကို ပြန်လည်တူးဖော်ခြင်းဖြင့် သီချင်းသည်များအား ဂုဏ်ပြုပါသည်။
ဒါကလဲ ခိုးယူပေါင်းသင်းခြင်းဆိုတာလေးဖတ်လိုက်တော့ ခုိုးမူ့မြောက်တယ်ဆိုတာကို သတိရသွားလို့ပြန်ရေးပေးတာ။
နာမည်ဟောင်း တွေ ပြန်ပေါ် နေတာ နဲ့ အတူ အတိတ်ဟောင်းတွေ ပြန်ဖော် နေကြသလား။
အခြား ပါဝင်နိုင်သော အဖွဲ့များ –
◘ Original/Copy သီချင်းမှတ်စု
◘ တချိန်တုန်းက တက္ကသိုလ်ဆီ
( ကျောင်းနှင့် ကျောင်းသီချင်းများ အကြောင်း အကျယ်တ၀င့် ) https://www.facebook.com/groups/289604951061222/
◘ မဇ္ဈိမလှိုင်း နှင့် သူတို့
(ဤစာမျက်နှာတွင် သီချင်းများ ပိုမို၍ စုံစုံလင်လင် ခံစားနိုင်လေသည်)
◘ မြန်မာသံလေးတွေ နားထောင်ကြမယ်
( ဤစာမျက်နှာတွင်လည်း ပိုမို၍ စုံစုံလင်လင် တွေ့နိုင်ပါသည်)
(Myanmar classical မှ ဖွဲ့တည်သည်)
The Wild Ones သဘာဝရဲ့ရင်သွေးငယ်များ
Khin Maung Toe မဇ္ဈိမလှိုင်း
Ko Nay Win Fan Club
Ko Ye’ Lwin (ကိုရဲလွင်- မဇ္ဇျိမလှိုင်း)
Khin One Fan Club
ဒီလို သီချင်းအစုအဖွဲ့လေးတွေနဲ့ပေါင်းလုပ်နေတာက မြန်မာသီချင်းတွေကို လူတွေသိလာအောင်
လူတစ်ယောက်ကိုဝေဖန်တဲ့အခါမှာ သူ့ရဲ့လုပ်ရပ် သူဘာကိုရည်ရွယ်တယ်
နောက်တစ်ချက် ဒီသီချင်းအကြောင်းပြောတုန်းက ကျနော်တင်တဲ့သီချင်းပိုစ်မှာလာရေးရင်
အဲဒီမှာကတည်းက တစ်ခါတည်း အခုလိုဖြေရှင်းလိုက်မှာ။
အများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပိုစ်မှာ နာမယ်မတတ်ဘဲရေးလို့ အခုမှသူများပိုစ်မှာလာပြောရတာပါ။
ဘယ်သူ မဆို ကျနော်ကို ကြိုက်တာ မကြိုက်တာ ကျနော်နာမယ်တတ်ပြိးဝေဖန်နိုင်တယ်။
ကျနော်ပိုစ်ထဲလာရေးရင်ဖြစ်စေ ဝေဖန်ရင်ဖြစ်စေ ကျနော်က ဘယ်တော့မှ ဖျက်မပစ်ပါဘူး။.
အခုလိုပြောတာကလဲ ကျနော့်ဘက်က ရပ်တည်ချက်ကို ကျနော်ပြောတယ်။
သီချင်းတွေ ကို လင့်ပေးတာ ကော်ပီရိုက်နဲ့ညိတယ် ခိုးမူ့မြောက်တယ်လို့ တစ်ယောက်ကပြောမယ်။.
ကျနော်ကလဲ ကျနော်အခုလိုလုပ်တာ သီချင်းရေးသူကို လေးစားလို့ လူတွေသိအောင်ဖြန့်ပေးတာ
ကျနော်ကိုယ်ကျိုးစီးပွားလုပ်တာ မဟုတ်ဘူးလို့ ခုံခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီမန်းလေးဂေဇက်မှာ မတင်နဲ့လို့ ပြောတယ်
ဒါပေမယ့် ကျနော်က ခိုးမူ့ကြော်င့်ဆိုတာကြောက်လို့ဖျက်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။
ကျနော်တရားဝင်ပြောပြီးသာ ဒီလိုသီချင်းတင်လို့ သီချင်းရေးသူ သို့မဟုတ် သီချင်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်က
မကျေနပ်လို့ပြောရင် ဒါမှမဟုတ် တရားစွဲမယ်ဆိုရင်တောင်မှ ဖြေရှင်းဘို့ အဆင့်သင့်ရှိပါတယ်.
မူပိုင်ခွင့် ကို နိုင်ငံတကာ တန်းဝင်ချင်ရင်
ကိုယ်မပိုင်တဲ့ သီချင်းတပုဒ်ကို ရှဲချင်တိုင်းရှဲတာ မတရားဘူး လို့ တော့ ထင်ပါတယ် ကပေါက် ရေ။
သီချင်း မှမဟုတ် ဝတ္တု၊ လူတွေ သုံးနေတဲ့ software တွေ အားလုံး နွယ်လာမှာပါ။
အနာဟောင်း တွေ ပြန်ဖော် မနေတော့ ဘဲ နေရာတိုင်းကို အသစ် ပုံစံ နဲ့ ပြုပြင်ဖို့ ကပေါက် ရေးထားသလို ပြောင်းဖို့အချိန်ရောက်ရင် ခေါင်းမမာဘဲ ပြောင်းဖို့ ကြိုးစားကြည့်ကြစို့လား။
ကိုယ့်ဟာကိုယ်သာ ဖတ်ကြည့်ကြပါတော့ အရပ်ကတို့.
ရှာရခက်တယ် ဝယ်ရခက်တယ်. ဘာညာ. သိပ်အလွယ်မပြောကြကြေးဗျ
အစကတည်းက ဒီဂျစ်တယ်ဖောမက်နဲ့ရှိပြီးသား တစုံတခုနော.
မူရင်းပိုင်ရှင်က သူပိုင်ပီး သူရလိုကြောင်း ပြောလာတဲ့ခေတ်. ခည.
ကိုယ်နားထောင်တဲ့သီချင်းတပုဒ် ဖန်တီးသူလက်ထဲ ဘယ်နှပြားးးရောက်သွားသတုံး
စဉ်းစားကြည့်စေချင့်. ခြံစည်းရိုးထင်းခွေကြတာလေ. မင်းတို့နှောင်းလူတွေ
ဘယ်သူ့မမီဘု ဘယ်ဝါ့မမီဘု အလွယ်လေး ပြောလိုက်ကြအုံး.
ကိုယ်တိုင်တော့. ပန်နာတောနစ်စကေးလ် အံကျအောင်ဆိုနိုင်ရဲ့လားမသိ
ပေမယ့်. ကိုယ်မပိုင်တာတွေကျ လုပ်ချင်ရာလုပ်နေကြတာ မြင်မကောင်းဘူးးး
ကိုယ် ကိုယ်တိုင် Reel ကိုင်ပြီး mp3 ရိုက်ခဲ့တာ ဟုတ်မဟုတ် ကိုယ့်ဟာကိုယ် သိပါတယ်ဟုတ်တာပြောလည်းမထောက်ခံတာ. တော့ နည်းနည်း. ချဉ်သဗျ.
(မှားမှန်းသိလည်း ဝန်မခံတာကိုတော့ မချဉ်တော့ပါဘု. ရွံသွားသကိုး).
ဆိုလိုချင်တာ. Digital format နဲ့ရှိပြီးသား ပိုင်ရှင် ရှိတဲ့ အရာတွေ လို့ပြောချင်တာပါ
မနေ့တနေ့ကထိတော့. ပိုင်ရှင် က နည်းပညာကြောင့်သော်လည်းကောင်း
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကြောင့်သ်ာလည်းကောင်း ကိုယ့်ပစ္စည် သူများလုပ်ချင်ရာ
လုပ်နေတာ မပြောသာခဲ့ဘူး. ယနေ့မျက်မှောက်မှာ. ပြောနိုင်လာတဲ့ခေတ်ရောက်လာတယ်.
တည့်တည့် ကို ထိတာပါပဲလား။
ကျနော့မှာလည်း ၂ ဘဝပါပဲ။
Real World မှာ တစ်ဘဝ
Virtual World မှာ တစ်ဘဝပါ။
ဒါကို ဒီ Virtual World က ဘဝကို အပြင်နဲ့ မရောပဲ တည်တန့်နေအောင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ကို ကြိုးစားနေရတာ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခိုးယူပေါင်းသင်းခြင်းလို့ တင်စားလို့မရတော့ရင် တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကားတင်ပြေးကြတာပေါ့ လေ။
ဇာတ် က တာ မကြည့်ဖူးဘူး။
သီချင်း ဆိုတာ ကြိုက်တယ်။
ကဗျာက ကျနော် လိုက်မမှီဘူး။
ရုပ်ရှင်ဘက်မှာ မိုးညအိမ်မက်မြူ မှာ အရမ်းကို သဘောကျခဲ့ဖူးတယ်။
ကဗာ ဆရာ မောင် သိန်း ဇော် ရဲ့ ကဗျာတစ်ပိုင်းတစ်စ လည်းးး သတိရမိပါသေးးးး
ဘာဒဲ့. . .
အဆုံး မရှိ အောင် ကျယ်ဝန်းတဲ့ အမှားတွေထဲ
တိမ်တွေက လှ လိုက်တာ
ကိုယ့်မှာ . . . . .
တရားနဲ့ ဖြေ ရ တယ်
ကဗျာ နာမည်က ရှုမျှော်ခင်း ဆိုလားးးး
သိပ် မမှတ်မိတော့ ဝူးးးးး
မောင်သိန်းဇော်ရဲ့ ကဗျာ တစ်ပိုင်းတစ်စ နဲ့
၀င်အားဖြည့်ပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ အလင်းဆက်ရေ…။
ကဗျာ ရေးသူများ စာရင်းမှာ
ဦးဘလက် နာမည်ကို မှတ်မှတ်ရရ ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့အတွက်
မနေ့က ရေးလိုက်တဲ့ ကိုယ့်မှတ်ချက်ကို ပြန်တွေးရင်း မောင်ဂီ ကို ဘက်လိုက်ရေးတာလို့ ထင်ကုန် ရင် ကျပ်တနာ (ကျပ်တနာ = ပြသနာ – ကွန့်ရေးတာ နားမလည်မှာစိုးလို့) ထပ်ရှင်းရမစိုးလို့ ထပ်ရှုပ်လိုက်ရပါသည်။
ဒီကိစ္စမှာမောင်ဂီ ကို ထုတ်လိုက်ပြီး စဉ်းစားကြည့်ကြစို့။
ကျုပ်လဲ ဒီအရွယ်တိုင်ထိ မြန်မာသီချင်း (အရင် အဟောင်းများ) တွေ နားထောင်ဆဲပါဘဲ။
ဟိုးတုန်းကထဲက ခွေတစ်ခွေ ထွက်တိုင်းတော့ မဝယ်နိုင်ပါ။
ဒါပေမဲ့ ကြိုက်တဲ့ သီချင်းတွေ စုစုပြီး ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်လက်ရွေးစဉ်ရွေးပြီး ဆိုင်သွားကူးခိုင်းလေ့ရှိပါတယ်။
ပိုက်ဆံ ပိုပေးရလဲ ကိုယ်အကြိုက်တွေ ဘဲ ဆက်တိုက်နားထောင်နိုင်တာပေါ့။
အဲဒီ အခွေတွေက တိတ်ခွေတွေ မို့ အခုထိ တိတ်ခွေထည့်ဖွင့်ရတဲ့ ကက်ဆက်ကြီး ကို နေရာပေးပြီး သုံးနေဆဲပါ။
စီဒီထဲ ကူးလို့ ရနေပေမဲ့ အချိန်မပေးနိုင်တာနဲ့ မလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာ။
အခုလို mp3 တွေလဲ ထွက်လာရော ဟား ဘာပြောကောင်းမလဲ computer folder တစ်ခု ထဲမှာ ကူးထားသပေါ့။
ဒီတော့ ကွန်ပျူတာနဲ့တွဲ နေသူမို့ အင်မတန် အဆင်ပြေပြီး သဘောကျခဲ့တာပေါ့။
ဒီလိုနေလာတာဟာ ကျုပ်နဲ့ အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်း နဲ့ အခြေအတင်ဖြစ်လိုက်တဲ့ အချိန်အထိပါ။
ကျုပ်သူငယ်ချင်းကတော့ သီချင်းနားထောင်တာ လုံးဝဝါသနာမပါဘူး။
နဂါးနီသီချင်း လောက်ဘဲ သိပါတယ်။
စာမြင်ရင် မြေကြီးပေါ်က ကျနေတဲ့ စာရွက်ပေါ်က စာကိုတောင် ဖတ်ချင်တဲ့သူ။
ဒါနဲ့ တစ်နေ့ အင်တာနက်ထဲ မှာ မြန်မာ ဝတ္တုတွေ စုထားတဲ့ ဆိုက် ထဲ က သူအင်မတန်ဖတ်ချင်တယ်လို့ ပြောတဲ့ (သခင်ဘသောင်းရေးတဲ့ စာအုပ်ထင်ရဲ့) စာအုပ် တွေ့လိုက်တာနဲ့ ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပြီး ပို့လိုက်တယ်။
ကျုပ်စိတ်ထဲမတော့ သူရတာနဲ့ ဝမ်းသာအားရ ဖတ်ပြီ ထင်တာပေါ့။
ဖတ်ပြီးပြီလား မေးတော့ မဖတ်ဘူးတဲ့။ မြန်မာပြည်ပြန်မှ ဝယ်မှာတယ်။
စေတနာနဲ့ ပို့သူ ကိုမှ မထောက် နဲနဲကျွဲမီးတိုသွားတယ်။
ကျုပ် ဂျူးတို့ မင်းလူတို့ စာအုပ်တွေကို ဝမ်းသာအားရ ဒေါင်းပြီးဖတ်ရင် သူအရင်က တားလေ့ရှိတာတော့ သတိထားမိတယ်။
စက်ထဲ ဗိုင်းရပ်ဝင်မှာစိုးလို့လို့ ထင်ခဲ့တာ။
“အလွယ်ရနေတာ ဘာလို့ ရစ်ချင်နေတာလဲ” ပြောလိုက်တော့
သူက ” ဒီ ဆရာကြီးမှာ ဒီလို စာအုပ်ထွက်ဖို့ သူ့အချိန်တွေ အလွယ်မရဘူး။ ရင်းပေးရတာ။
နောက်ပြီး သူတို့ မှာ စာရေးပြီး မချမ်းသာကြဘူး။
အဲဒါကို သိရက်နဲ့ သူတို့ စာကို အလကား အလွယ်ယူ မဖတ်ချင်ဘူး။ သူတို့ က တရားဝင်ခွင့်ပြုလို့ ယူဖတ်တာ က ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ ခွင့်မပြုဘဲ သူတို့လုပ်အားကို အလွယ်ယူတာ ခိုးတာဘဲ”
လို့ ကျုပ်ကို အုပ်ပါလေရော။
အဓိက သူခံစားနေရတာ ကတော့ ဒီလို သက်ကြီးရွယ်အို စာရေးဆရာကြီးတွေ ဟာ အပေါစားအချစ်ဝတ္တုတွေလို ပိုက်ဆံ မရရှာပါဘူး။
ဒီလို စာကောင်းတွေ ရေးတဲ့ ဆရာ/ဆရာမကြီး တွေဟာ ချို့တဲ့ကြရှာတယ်။
ဒါကို သူ အလွဲသုံးစား မလုပ်ရက်တာနေမှာပါ။
ဒါပေမဲ့ အကျင့်ပါနေတော့ သွားကွန့် လိုက်မိတယ်။
“သူများ တွေ အများကြီး လုပ်နေတာ ကိုယ်တစ်ယောက်ဖတ်လိုက်တာနဲ့ တော့ မထူးပါဘူး ဆရာ ရယ်” လို့။
“အင်တာနက်ပေါ်ကနေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆရာမကြီး လုပ်ပြီး သူများတကာကို ဆုံးမစကားတွေပြောနေသူက ကိုယ့်နဂို အသိ စိတ်ဓာတ်နဲ့ မဟုတ်ဘဲ ဥပဒေတွေ၊ အမိန့်တွေ၊ ဒါဏ်ကြေးတွေ လာမှ လိုက်နာမတဲ့လား” တဲ့။
တောက်စ်စ်စ် (မူ -ဂဂ)
အဲဒီမှာတင် ဟတ် ထိသွားတာမှ ဘာမှမပြောနိုင်ဘဲ ပေစောင်းစောင်း ဘဲ ပြန်ကြည့်လိုက်နိုင်တော့ သဗျား။
အဲဒီနောက်တော့ နဂိုမူလ ကက်ဆက်အိုကြီးကိုဘဲ မီးဖိုခန်းထဲထားပြီး ဟင်းချက်ချိန် နားထောင်နေပါတယ်။
ဂျူးတွေ၊ မင်းလူတွေ ဒေါင်းထားတာတွေ မဖျက်ရက်ပေမဲ့ မဖတ်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ (သူတို့ တရားဝင် ခွင့်ပြုမဲ့ အချိန်အထိပေါ့)
မောင်ဂီ နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ ကျုပ် ခံစားချက် သက်သက်ပါ။
ကြည့်ရတာ မောင်ဂီ မှာလဲ ကျုပ်သူငယ်ချင်းလို ဂီတ သမားတွေ ဘက်က နာနေတာ ရှိလို့ နေမှာထင်ရဲ့။
မူပိုင် သံကြားတိုင်း မျောက်ကို ငပိ နဲ့ တို့ သလို တွန့်တွန့်တွန့် ဖြစ်ဖြစ်နေလို့။
ကိုလတ်ရေးတာကို ကိုလတ်ရေးတာလို့ဘဲကျနော်က သတ်မှတ်ပါတယ်။
“ကိုပေါက် ဒါကိုတော့ မတင်သင့်ဘူး”လို့နာမယ်တတ်ပြီးလာပြောရင်
ကျနော်က” အေးကွ “ဆိုပြီးဖျက်ပေးလိုက်မယ်။
ကိုယ်တိုင်ပြောရမှာအားနာရင်ဖြစ်ဖြစ် မပြောချင်ရင်ဖြစ်ဖြစ် လူငှားနဲ့ပြောခိုင်းလဲရတယ်။
အခုဟာက ပိုစ်နဲ့လုံးဝမဆိုင်တဲ လူအများဝင်ဖတ်မယ်လို့သေချာနေတဲ့
ရွာကလုပ်မယ့်အလှုပိုစ်မှာလာပြီး နာမယ်မတတ်ဘဲ သို့လောသို့လောဖြစ်အောင်ပြောခဲ့လို့
သူကြီး ကစည်းကမ်းမထုတ်နိုင်ဘူး စည်းကမ်းမများချင်ဘူးလို့စာပြန်တယ်။
ဒါပေမယ့် တင်ပြီးသား နှစ်ပုဒ်လုံးကို ဖျက်ပေးခဲ့တယ်။
နောက်မှာ ဘယ်တော့မှ မန်းးလေးဂေဇက်မှာသီချင်းမတင်ဘူးလို့လဲစိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။)
ဒါပေမယ် ဒီသီချင်းတင်တာကို လက်ခံတဲ့လူအစုအဝေးရှိတဲ့ ဆိုက်တွေ အသင်းအဖွဲ့တွေမှာ
အခုဟာက နာမယ်မတတ်ဘဲ ခိုးမူ့မြောက်တယ်လို့ ပြောတာကို မကျေနပ်တာ။
လူတစ်ယောက်ကို ခုိုးမူ့မြောက်တယ်မမြောက်ဘူး ဆုံးဖြတ်ခွင့်က တရားရုံးမှာဘဲရှိတယ်။
အတိအကျပြောရရင် လူတစ်ယောက်အပေါ်မှာအလွယ်တကူမှတ်ချက်ပေးတာကို ထောက်ပြတာ။
ကျနော့်ဘက်ကတော့  ဒီသီချင်းနဲ့ပါတ်သက်ရင် ဒီနေရာမှာ တင်အားလုံးပြီးဆုံးပြီလို့မှတ်လိုက်ပါတယ်။
အချို့သောဂျာနယ်တွေမှာ ကျနော်စာမူကို ယူသုံးတယ်။
ပေးရင်ယူတယ်လို့ပြောရတာက မယူဘူးဆိုရင် သိပ်ပါချင်လွန်းတယ်ထင်မှာစိုးလို့။
စာမူအဆုံးမှာ ကိုပေါက်(မန္တလေး)ဆိုတဲ့ကျနော်နာမယ် ပါတယ်။
တစ်ခုတော့ရှိတယ် ကျနော်ရေးထားတာကို ယူသုံးပြီး ကျနော်နာမယ်မတပ်ရင်တော့ပြောရမှာ။
အဲတော့ဒီရထားတဲ့နာမယ်လေးကို ပျက်စီးအောင်ဘယ်တော့မှ မလုပ်ဘူး။
ဒါဆို ကိုလတ်ကြီး ကျနော့်သဘောကို သိလောက်ပါပြီနော်။
၀ရမ်းပြေးဘလက်ရဲ့ ပို့စ်ကို တိတ်တိတ်လေး တစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့ပြီးပြီ။
ပထမပြောချင်တာက ကျမလည်း မန္တလေး သိန်းဇော်ရဲ့ ကိုစောညိမ်းသီချင်းပြန်ဆိုတွေ ကြိုက်တယ်။
မိုးသက်လေနှင်၊ချစ်ပြုံးနှင်းဆီ၊သစ္စာ (ဒီသီချင်းစာသားလေးတောင် ကိုပေါက်ကြီးဆီ ဒီရက်ထဲ တောင်းဖြစ်လိုက်သေးတယ်)်
အိပ်မက်စေတမန်ကတော့ သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံးလို့တောင်ပြောချင်တယ်။
ကျမစိတ်ထင် တင့်တင့်ထွန်းနဲ့ရိုက်တဲ့ တင့်လှပေဟန် ဗွီဒီယိုက မန္တလေး သိန်းဇော် မင်းသားပဲလားလို့ ။
သူရယ် ခိုင်ထူးရယ် သိပ်မရှေးမနှောင်းပဲ ဆရာဝန်မတွေနဲ့ ယူလိုက်ကြတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကေဇော်နဲ့ ကဗျာကတော့ မခံစားတတ်။
ကွန်ပျူတာရှေ့ရောက်မှ မဟုတ်ပဲ ဘာအကြောင်းလေးတွေ့တွေ့ ဂဇက်ထဲပြန်ရေးလိုက်မန့်လိုက်မယ်ဖြစ်မိနေတော့ ၂၄နာရီလုံး ကျမ ခိုးမှုမြောက်နေပါလား။
စောစောက ၀င်ပြီး အားရပါးရမန့်မယ်လုပ်ရင်း အောက်ဆက်ဖတ်တော့ မန့်ရမှာကြောက်လို့ အသာလေးပိတ်ခဲ့ရတယ်။
ရှေ့က မလတ်က တောထွင်သွားပြီဆိုတော့ ဒီလမ်းလေး ဆက်လျှောက်ကြည့်ပါရစေ။
သီချင်းတွေက အခုအသက်အရွယ်မှာ သိမ်းထားချင်လောက်အောင် မဆွဲဆောင်နိုင်တော့တာကြောင့် တစ်ပုဒ်တလေကလွဲရင် နားမထောင်ဖြစ်တော့ဘူး။
၀တ္ထုတွေကတော့ အရင်က ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး ဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်။
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ နာမည်လေးတွေ တွေ့တိုင်းလည်း ဖတ်ဖူးချင် ကိုယ့်ဆီမှာ သိမ်းထားချင်စိတ် ခုထိဖြစ်မိနေတုံးပဲ။
ဒါပေမယ့် အခု လက်နည်းနည်းတွန့်လာတယ်။
ငါ တရားပါ့မလားဆိုတဲ့ စိတ်ဝင်ဝင်လာမိတယ်။
ဒါကြောင့် ရွှေအိမ်စည် ရဲ့ စာပေဒါနတောင် ဆက်မဖွင့်မိတော့ဘူး။
ခေတ်ဟောင်းသီချင်းတွေ၊ရှေးဟောင်းစာအုပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ၂ပိုင်းရှိပါတယ်။
ရှာဖွေ စုဆောင်းပေးတဲ့ သူတွေလည်းရှိဖို့လိုပါတယ်။
သီချင်းတကယ်ချစ်သူ၊စာတကယ်ချစ်သူတွေမှသာ ဒီလို အပင်ပန်းခံ မှတ်တမ်းတင်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်နိုင်ပါမယ်။
မှတ်တမ်းမှတ်ရာဖြစ်သွားတဲ့ သီချင်း၊စာအုပ်တွေကိုတော့ မူလ ဖန်တီးသူရဲ့ ဆက်ခံသူများကို တန်ဖိုးတစ်ခုပေးပြီးမှ ဆက်လက် မျှဝေသင့်ပါတယ်။
အဖေတစ်ခု သားတစ်ခု ရုပ်ရှင်ထဲက စိန်မြင့်လိုပေါ့။
ကလေးလေး(အောင်ထွန်းလေး)ကို သူ့အမေ(ဆွေဇင်ထိုက်)နဲ့ ကွဲကွာနေချိန် စောင့်ရှောက်ပြုစုချစ်ခင်ခဲ့ပေမယ့် အမေရင်းနဲ့တွေ့ရင် အကျိုးမျှော်ပြီး ပြန်ထည့်ပေးလိုက်ရပါတယ်။
အဲဒီလို ထိန်းသိမ်းပြီး အခွင့်အရေး ရသင့်တဲ့သူတွေ ရစေတဲ့ အလုပ်ကို သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေက တရားမျှမျှ တာဝန်ယူ လုပ်ပေးရပါမယ်။
သမီးကတော့ မန္တလေးသိန်းဇော်ဆို ဇာတ်မင်းသားဆိုတာကလွဲလို့ ဘာမှ မသိပါဘူး…သူ့ခေတ်ကိုလည်း မမီလိုက်ပါဘူး…ဒါကြောင့် သူနဲ့ပတ်သက်တာတော့ လူကြီးတွေရေးထားတာပဲ လိုက်ဖတ်ရတာ…
အဲ… မိမိကိုယ်မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းခြင်း ဆိုတာလေးရော၊ Virtual World ဆိုတာလေးတော့ သဘောကျမိပါတယ်… တွေးကြည့်တော့ ဟုတ်သားနော်…
@ လုံမလေး မွန်မွန်
လုံမလေး ပဲကောင်းပါတယ် မွန်မွန် ရေ…။
ကွန်းမန့်လေး ချီးမြှင့်ပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျာ…။
Admin Kai says သတင်း.. စာမူ.. ဓါတ်ပုံ.. တပိုဒ်.. တပုဒ်.. ရှယ်ခွင့်မရှိပါ…။
ကိုးကားမှီငြမ်းပြီးရင်.. ခရက်ဒစ်တူ.. ဆိုပြီးလည်း.. လုပ်ခွင့်မရှိပါ… အဲလိုလုပ်လို့.. မူပိုင်ခွင့်ကနေလွတ်မသွားပါ…။)
ကိုယ်ပိုင်အတွေး ကိုယ်ပိုင်အရေး ကိုယ်ပိုင်ဟန် ကိုယ်ပိုင်မူ ဖြင့် ရေးကြကုန်ရာ၏။
ဖြန့်ချီ မျှဝေ အသိပေး တဆင့်လေးတွေ ကင်းကြကုန်ရ၏။
ဤကား ဂဇက်ဝက်ဆိုဒ် အလိုတည်း…….။
ကိုဘလက်ချော ရေ တစ်ခေါက်ပြန်ဝင်ဖတ်လိုက်မှ ပိုစ့် နဲ့ မန့်ချက်တွေကို အမှီပြုပြီး အတွေးတွေ အတွေးတွေ ခေါင်းထဲမှာစီကာရလာခဲ့လို ကိုဘက်ချောရေ(လက်ဆွဲနုတ်ဆက်ဟန်ဖြင့်) ဒီပိုစ့်မှာ ဒီလိုရေးပြလို့ ကျေးဇူးအထူး တင်တယ်ဗျာ ကျေးဇူးပါဗျို့။
ကိုဘလက်ရေ……… ၀င်မရလို့ ခုမှရောက်လာတာ ခွင့်လွှတ်ဗျာ …….။ မန္တလေးသိန်းဇော်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်သိတာက 1986 လောက်မှာ ကြောငြာခဲ့တဲ့ ” ပြုံးနေတဲ့ သွပ်ဆူးကြိုးလေး ” ဆိုတဲ့ ကြော်ငြလေးပဲ သိတယ်ဗျ….။ ကဗျာရေးတယ်ဆိုပေမဲ့ သူ့အနုပညာ( ကတာကိုပြောတာပါ) သိပ်ပြီးမကြိုက်လို့ မဖတ်ဖြစ်ဘူးဗျ ….။ နောက်တစ်ကယ်ဖတ်ချင်စိတ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့လည်း လက်လှမ်းမမီတော့ဘူး …..။ အဲဒိတော့ သိပ်ပြီးပြောစရာမကျန်ဘူးဗျ………။ ဒီလိုပဲလေ…… ကိုယ်စိတ်ဝင်းစားတဲ့အရာ သူကစိတ်မ၀င်စား ကိုစိတ်မ၀င်းစားတဲ့အရာ သူကစိတ်ဝင်စားနဲ့ သံသရာလည်နေတဲ့လောက ကြိးထဲမှာ မင်းနဲ့ငါတွေခဲ့တယ်လို့ ပြောခဲ့တဲ့ ဆရာ လင်းသူလည်းလောကကြီးထဲမှာမရှိတော့ပါဘူး သူ့စကားတွေကတော့မှန်နေတုန်းပါပဲ………..။
ပြုံးနေတဲ့ သံဆူးကြိုးကလေးက ပုံနှိပ်ပြီး မှ ထုတ်ဝေခွင့်မရခဲ့ဘူးလို့ သိရပါတယ်ဗျာ…။
မောင်သိန်းဇော်ရဲ့ ကတဲ့အနုပညာကို ခင်ဗျား မကြိုက်ပေမယ့်…
မောင်သိန်းဇော်ရဲ့ ကဗျာရေးလက်ကိုတော့ ခင်ဗျား ကြိုက်လောက်ပါတယ်လို့…
ပြီးပြီ မှတ်နေတာ. မအားလို့မဝင်ဖြစ်တယ် ဇွတ်ကို ပြောချင်ရာ ပြောတော့သကိုးးး
ကိုယ်မပိုင်တဲ့ အရာတခုကို ကိုယ်မပိုင်တဲ့ နေရာတခုမှာ ကိုယ်ကြိုက်သလို
ရော့ဟေ့ ယူဟေ့ ဒေါင်းဟေ့. လုပ်တာ တရာသလားမျှတသလား.
ကောင်းသလား ဆိုတာ က စပီးစင်းစားစေလိုပါတယ်ခည.ပြောတဲ့လူက
ရွာ့ချဉ်ဖတ် မိဂီ တို့. ပြောတဲ့နေရာက ဂဇက်ဒေါ့ကွမ်း တို့ ခနဖယ်ထား ကြည့်လိုက်ပါအုံး
(ခွက်ဒစ် အင်န် ကျေးကျေး တူ အရီး)
ဆက်ဆွဲပယဇီ. ခု. ဘဘဘလက်ပိုစ့်မှာ. ဒါတွေ လာပြောဖြစ်နေတာရဲ့
အကြောင်းကတော့ တခြားမဟုတ်ပါဘူးး. ကိုယ်မပိုင်တဲ့အရာတွေကို
ကိုယ်မပိုင်တဲ့နေရာမှာ တင် သူက တင်တယ်. ပြဿနာ ရှိလာနိုင်တယ်နော.
ဒီနေရာတွေ ဒီနေရာတွေကတော့ လက်တလော ဒီလိုပြောတယ်.
ဒီဖြစ်ရပ်တွေတော့ ဖြစ်ခဲ့ပြီးသွားပီနော ပြောဖူးတယ်.
ဒီလိုမတင်သင့်ပါဘူး. ကျနော် က ဝေဖန်တယ်. တင်သူကဖျက်တယ်. ပြီးပြီလေ.
Rule no. 13 ကကိုထောက်ရှုတာတော့ ဟုတ်ပါရဲ့.
ကိုယ့်အိမ်ကိုယ် မီးရှုိ့တာ အရေးမဟုတ် ရပ်ကွက်ပြာကျမှာက အရေးပါ
လို့ပြောတာက မီးမကစားသင့်ဘူးပြောတာက လွန်တာလား.
သူ့ပိုစ့်မှာ ဂလို ပြောဖို့ ဆိုဖို့တွေ ဖြစ်လာတာကြောင့်ပါ.
ဘဘဘလက်ရေ. ဂလို. သည်ဆိုက်မှာ ဒါတွေ လာတင်ရင် အားလုံးအတွက်
ဒီလိုဒီလို အန်ဒရယ်ရှိနိုင်တယ် ရော်. ကျနော်ပြောတယ်.
တင် သူက ဖျက်တယ်. ပီးပြီလေဗျာ. သည်အတိုင်းကျနော်တို့
ဘေးကင်းစွာ စီးမျောနေတာ ၆ လမကတော့ဘူး.
(ကျုပ်ဆို မေ့တောင်နေပြီ ). သို့သော် မတင်ရလေခြင်း. ဆိုပြီး
စိတ်ထဲ မှတ်သလားတော့မသိပါ ( မသိလို့မသိပါရေးတာပါ)
ကြုံတိုင်း. မန်းရှင်းလာလာလုပ်နေတာ တခုက အတော်. ကသိကအောက်
ဖြစ်သဗျ. သည်ပိုစ့်မှာလည်း ရေးပြန်တယ်.
ကျနော် ပြောခဲ့သလို တကယ်ပဲ ဥပက္ခောရှုပါတယ်. ကြိုက်တာ ရေးကြိုက်တာပြော.
သို့သော် ခေတ်ကာလ ရွှေ့လျောလာတော့ ထရန်းက ချိန်းလာတယ်. မတူတော့ဘူး
မဟုတ်တာတွေပဲ ရေးခဲ့ပြောခဲ့ သလိုလို. ကောင်းတာတွေပဲ မတက်လာအောင်
ယုတ်မာခဲ့သလိုလို. လက်တလော စက်ဘီးတွေ သဘောကျနေလို့
ကျနာ် တောမြို့လေးမှာ နေတုန်း ဆိုပါတော့ (စက်ဘီးဝယ်ရင်မြို့နယ် ကုဒ်နဲ့ register ) လုပ်တာကိုး. ဂလိုနဲ့ ဘော်ဒါတယောက် စက်ဘီးဝယ် စီးသပေါ့ဗျာ.
သူပြန်မယ့်နေ့ကျ. သူက အိုက်ဒိ စက်ဘီးလေး ကျော့်ကို လက်ဆောင်ပေးတယ်ပေါ့
ခေတ်ကာလ ရွေ့လျှောတဲ့အခါ ကျနော်မြို့ပြောင်းသပေါ့.
တညနေသား. ရဲကစစ်ပါလေရော. (ကျုပ်တို့ က အုံနာအချိန်းအပြောင်း မလုပ်ခဲ့ဖူးလေရယ်. ).
ကျန်းးးး. ကိုယ်မပိုင်တဲ့စက်ဘီးကိုစီးတယ်. (ပိုင်တာက ပိုင်တယ်နော. ပိုင်ကြောင်းသာ တရားဝင် ပြဖို့သက်သေခံမရှိတာ). သတ်မှတ် နေရာနယ်နမိတ်တွင်းမဟုတ်ဘဲ တခြားဒေသမှာ စီးတယ်. အဲ့ဒါနဲ့တင် အမှုမြောက်နေပီ ခည.
တခြား ဘာ တခုမှမလိုဘူးးးး
ငဖြစ်ငခံရဲတယ် မကြောက်ဘု မမှုဘု ဆိုတာ က ဒီနေရာမှာ အကျုံးမဝင်ဘူး
ရပ်ကွက် မြို့နယ် လယ်ဗယ်. ဒါမိုးက္စိဒွေ မရှိအောင် လုပ်ကြ ကြိုးဇားကြရမှာပဲ.
အဲ့. အဲ့ထက်ပိုမြင့်ရရင်တော့. မင်းတို့ ရွှေတွေက. ခိုးတတ်ကြတယ်. ဘတ်တတ်ကြတယ် ဟ ပြောခံထိဖို့ ဖြစ်လာလိမ့်မယ် ခည.
ဆိုတော့ ပြန်ကောက် rule no 13 ကိစ္စ.
ကိုယ်မပိုင်တဲ့ ပစ္စည်း ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်လုပ်တာ ကိုယ့်နားကလူတွေ ထိခိုက်ဖို့
အလားအလာ ရှိနေတာ. မလုပ်သင့်ပါဘူး ပြောသူ အမှားလားးး လုပ်ချင်လုပ်မှာပဲပြောသူ
ပြန်ကောက်ရရင်. ဒီရပ်ဝန်းမှာ ဒါတွေ အသစ်ထွက်လာတယ်.
ကိုယ့်ဝန်းကျင်က လူတွေကလည်း ဒလိုအော်လာတယ်
ကြားခံစာဖတ်သူတွေ စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်ရင် စိတ်မကောင်းဘာဘူး
ပြောဖြစ် ပြောတတ်ခဲ့ပါတယ်. မှားတာတွေပြောခဲ့တာမှမဟုတ်ပဲ.
ယခုကိစ္စကတော့. ပြဿနာတက်ချင်ယုံ ရန်ဖြစ်ချင်ယုံသက်သက် လို့
ဘယ်အစိုးရရဲ့ ဘယ် စည်းမျဉ်း ဘယ်ဥပဒေမဆို. ခနထားလိုက်. ယဉ်ကျေးမှုတို့
ကာလချာတို့လည်း မေ့ထားလိုက်. အဲ မန်းဂဇက် စည်းကမ်း ဘာညာသာဒကာ
ကိုလည်း မစင်းဇားနဲ့ဦး. ကိုယ်မပိုင်တဲ့ ပိုင်ရှင် ရှိတဲ့ အရာ တခုခုကို
ကိုယ် နှစ်သက်သလို လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်တာ တရားတယ်ထင်ရင်
ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ Virtual Life နဲ့ Real Life ကို အဲ့လိုဖွဲ့တော့လဲ…
ကိုယ်က ခပ်ပြင်းပြင်းပြောခဲ့တဲ့အရာက အများကြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့သွားကြောင်း အံ့သြရပါတယ်… ကျောင်းဒကာကြီးရေ…
မမြင်ရတာ အတော်တောင်ကြာပြီနော်… ၀တုတ်ရေ…။
ကွန်းမန့်လေး ၀င်ရေးပေးတာ ကျေးဇူးအထူးပါနော့်…။
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ကဗျာပြခန်းထဲမှာ ဆရာမင်းသုဝဏ်တို့ 
ဦးပုည တို့ ရှေးဆရာကြီးတွေရဲ့ ရှေးကဗျာတွေ
ထည့်ပြဖ်ု့ိ မသင့်ဘူးပေါ့နော်
ကျွန်တော်တို့က ရှေးကဗျာလေးတွေထဲက မမေ့နိုင်တဲ့ကဗျာလေးတွေကိုပါ ကြိုကြားကြိုကြား ထည့်ပြချင်တာလေ
ဆရာ့ဆရာကြီးတွေ ကို လွမ်းဆွတ်ခြင်း ဂုဏ်ပြုခြင်း အနေနဲ့ပေါ့
အခုလို မူပိုင် ခွင့်တွေ ဘာတွေ တိတိကျကျပြောလာရမယ်ဆိုရင်တော့. . .
ဆရာမင်းသုဝဏ်တိူ့ နောက် လိုက်ပြီးးး
ဘီလို လုပ်ရပါ့မလဲ ချစ်သော သူကြီးရေ
သဂျီးမန့်ချက်အရတော့ ခရက်ဒစ်တူး ရုံနဲ့ မရပါတဲ့။
ဦးပုညလို.. ရှေးနှစ် ရာချီတွေက… (မှတ်ပုံတင်ပြီး မူပိုင်ခွင့်ဆက်မထားရင်) အများပိုင်ဖြစ်သွားတာမို့.. မည်သူမဆို.. သုံးလို့ရပါတယ်..။
သာမန်အားဖြင့်.. ဖန်တီးသူကွယ်လွန်ပြီး..အနှစ်၇၀ မှတ်ပါ..
မြန်မာပြည်တွင်းကနေ … ကော်ပီတွေသိပ်မရိုက်ကြပါနဲ့…
သဂျီးရဲ့ အီး လို ရှင်းချက်များကို ချာချာလည်ကာ ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့
သူက အဓိက ပိုင်းထားတာက 1978 ရဲ့ နောက်ပိုင်းကို ပိုင်းတာကလား
အဲဒီနောက်မှာ ထုတ်ဝေသမျှ အတွက် မူပိုင်ခွင့်ဟာ ပိုင်ရှင် အသက်ရှင်သရွေ့ ကာလပတ်လုံးနဲ့ သူ သေဆုံးတဲ့နောက် အနှစ် 70 အထိ ခံစားခွင့် ရှိသပေါ့။
အဲ ကြားက အမည်မဖော်ဘဲ၊ ဒါမှမဟုတ် ခိုင်းစေလို့ ပြုလုပ်ရတဲ့ အရာတွေကိုတော့ စတင်ပြုလုပ်တဲ့ နေ့ရက်ကနေ နှစ်ပေါင်း တစ်ရာ့နှစ်ဆယ် ဒါမှမဟုတ် စတင် ပြသတဲ့ နေ့ရက်ကနေ 95 နှစ်အထိ ခံစားခွင့် ပေးသပေ့ါ။
အဲ 1978 ရဲ့ အရှေ့က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လက်ရာတွေအတွက်တော့
တိတိကျကျ သတ်မှတ်ထားချက် မရှိလို့ပဲ ယူဆရမယ့်ပုံ
ဒါ့အပြင် ဒီ မူပိုင်ခွင့်ကို ထပ်မံ သက်တမ်းတိုးလို့ မရတာကြောင့်
ဒီအချိန်သတ်မှတ်ချက်ထက် ကျော်ရင်တော့ ကြိုက်သလို သုံးစွဲနိုင်တယ်လို့သာ ယူဆလိုက်ပါကြောင်း
ဒါကြောင့် ကဗျာပြခန်းကိုယ်စား ပြောပေးရရင်
ကျွန်တော်တို့တတွေ အဲဒီ စည်းမျဉ်းအရ 1978 ရဲ့ ရှေ့ပိုင်း ရှိသမျှ ကဗျာများကို အလျဉ်းသင့်သလို ထည့်သွင်းသွားပါမယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ကဗျာပြခန်းမှာ ခေတ်စမ်းကဗျာ အမျိုးအစားအထိ ပြသသွားပါမယ်ဆိုတာ သဂျီးကို တစ်ခါထဲ ပြောပါရစေခင်ဗျ
ကျောင်းဒကာကြီး ကိုယ်တော် ဘဘဘလက် ခင်ည 。。。。
ကျနော်ကတော့ ဦးသိန်းဇော်ကို ၂နေရာမှာ ကြိုက်ခဲ့ဖူးပါတယ် …
“ဇာတ်မင်းသားလေး သိန်းဇော် သိန်းဇာ် တိုင်းပြည်ကမျှော် 。。。 ” ကိုယ်တိုင်တောင် အဖွားကို သူ့သဘက်နဲ့ ခေါင်းပေါင်းလုပ်ပီး အိမ်မှာ ကဖူးတယ် 。。。 ခုံပေါ်တက်ကတာ ပြန်အဆင်း ခလုပ်တိုက်လဲလို့ သွားတချောင်းတောင် ကျွတ်ဖူးရဲ့ 。。。
နောက်တခုကတော့ 。。。。。 ” သာသနာတဖက် .. ရာဇာတဖက် … ဘလာဘလာ .. ” အဲ့လာလဲ လွှတ်ကြိုက်သဗျို့ …
ဒါလောက်ပါဘဲ ကျောင်းဒဂါကြီး ကျန်းမာလန်းဖြာပါစေ ….. ။
၂ နေရာမှာ ကြိုက်တယ် ဆိုကတည်းက
နင်က သိန်းဇော် ပရိသတ်ပဲ….။
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ရပါစေ စောဖွပြေးရေ…။
ကလေးး ၁၂ ယောက်လောက် ရပြီးး အလုပ်ရှုပ်နေကြပြီလားးမသိဘူးးနော်…
ခိုးယူပေါင်းသင်းနေမိပါတယ် ဝန်ခံခဲ့ကြသူတွေ ပြောပါတယ် …
ဘယ်လောက် ပျော်ခဲ့မလဲ ဆိုတာခံစားသိပါတယ်။
တစ်နေ့တော့ အပြင်မှာ လူချင်း ဆုံချင်ပါသေးတယ် ဇီကလေးရယ်။
ကိုကို့ ကို ကျွန်မ က ခိုးတာပါလို့ ပြောလဲ ဒီတစ်ခါတော့ မရတော့ဘူး။ ((စီဒီ – ဒေါ်ဆွေဇင်ထိုက်)
အနားတောင်ကပ်ခွင့်မရ ဘဲ အဝေးက မီတာ ၁၀၀၀ အကွာ နေရမတဲ့ အမိန့်ချခံ ထိထားလို့ပါ။
တစ်နေ့ပေါ့။ ပြောစရာတွေ အများကြီးနဲ့ ပြန်လာချင်ပါသေးတယ်။
ခိုးးး ပြန်လာတယ် ပေါ့လေ …
Real Life မှာ အရင် အေးးချမ်းးပါစေအူးးး အရီးးရေ…
အသစ်​​တွေဘယ်​​လောက်​​ကောင်း​ကောင်း အ​ဟောင်းကိုပဲ တစ်​၀ဲလယ်​လယ်​ ဆိုတဲ့ စကား မှန်​သားပဲ ။
@ ကိုဘလက်​​ရေ တစ်​ချိန်​က မိုး​ဝေ မဂ္ဂဇင်းထဲမှာပါခဲ့တဲ့ ကဗျာဆရာ ပိုင်​သ ရဲ့ အလီဘာဘာနဲ့ ခိုးသား​လေးဆယ်​ ကဗျာ​လေး ဖတ်​ဖူးလား ။ ခိုးခြင်းနဲ့ ပတ်​သက်​လာရင်​ အဲ့ကဗျာ​လေးကိုပဲ ပြန်​ပြန်​သတိရ​နေမိလို့ ။ ​နောက်​ပိုင်း အဲ့ဆရာက ကဗျာမ​ရေး​တော့ဘဲ ဒါရိုက်​တာဘက်​လှည့်​သွားဆို